bt-auto bulletek auto nitondra jiro orinasa mpamokatra jiro - Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd.
Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd. (fantatra amin'ny anarana hoe BT- AUTO) dia any Guangzhou, Shina.Izahay dia miasa amin'ny matihanina amin'ny jiro LED mandeha amin'ny fiara mandritra ny taona maro.Manome vokatra sy serivisy avo lenta (OEM sy ODM) ho an'ny mpanjifa izahay.
Ny vokatra LED BT-AUTO dia miorina amin'ny fampisehoana avo lenta.Izahay dia nanitatra ny isan-karazany ny fiara LED jiro vokatra, mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa.
BT-AUTO dia serivisy tokana, ny isan-karazany ny vokatra dia afaka mahafeno ny fangatahan'ny ankamaroan'ny mpanjifa.Miaraka amin'ny ekipan'ny varotra sy serivisy za-draharaha, dia afaka mahatsapa ny finoanay izahay "Ny mpanjifa voalohany, serivisy voalohany".
BT-AUTO dia manam-pahaizana manokana amin'ny tsenan'ny jiro fiara iraisam-pirenena nandritra ny taona maro.Nanangana fifandraisana ara-barotra tsy tapaka amin'ny mpanjifa avy amin'ny firenena sy faritra maro izahay, toa an'i Eoropa, Rosia, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Azia Atsimo Atsinanana sy ny sisa, ary nahazo laza tsara izahay.Miarahaba antsika mpiara-miombon'antoka manokana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Ny kalitaon'ny BT-AUTO Lighting dia ambony hatrany.Manao fanaraha-maso kalitao henjana izahay amin'ny fomba rehetra, toy ny: fitsapana hafanana avo sy ambany, fitsapana hafanana, fitsapana fahanterana, fitsapana tsy tantera-drano, fitsapana tsy misy vovoka, fitsapana malefaka / ambany, sns.
Ny maha-zava-dehibe ny BT-AUTO dia fanavaozana.Natokana ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana izahay, tsy mitsahatra mamoaka vokatra vaovao hatrany.
BT-AUTO, azo itokisana.
Taratasy fanamarinana BT-AUTO
Ekipa tanora sy mazoto izahay, matihanina ary za-draharaha ihany koa.
Manome serivisy avo lenta miaraka amin'ny vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifanay izahay.
Ny maha-zava-dehibe antsika dia ny fanavaozana.Natokana ho an'ny R&D izahay, tsy mitsahatra mamoaka vokatra vaovao hatrany.
Ny finoanay dia "Ny mpanjifa aloha, ny serivisy voalohany".
Orinasa: Guangzhou Bulbtek Electronics Technology Co., Ltd.
[Fitsidihana] Dia 1 andro mankany amin'ny Farihy Jingshan, Qingy...
[PRODUCT] Fampitahana ny Halogen, HID, Spe...
[VOKATRA & ASA] Ekipa BT-AUTO 2 ...
[ALIBABA] Alibaba Super September Fifaninanana...